ညီလင်းသစ်: အာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၃)
Posted by ညီလင်းသစ် au 27.3.12
အင်း အလှမ်းမဝေးတဲ့ရန်ကုန် ပြန်ရောက်တဲ့အခါချစ်သူလေးဘေးနားမှာထိုင်နေသလို ရင်တွေဘာတွေခုန်လို့...
အရေးအသား နဲ့ တင်ဆက်ပုံ ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ
တရုတ်ကားတွေလို အပိုင်းများများခွဲတင်ပေးပါ :)
Ton fils, it est très beau!! Merci pour les superbes photos :-)
စားချင်တာတွေစားခဲ့ရ၊ သောက်ချင်တာတွေ သောက်ခဲ့ရတော့ ဘယ်လိုလဲ ၀ိတ်ရော တက်မလာဘူးလား
ကျွန်မဆို ပြန်ခါနီး ၀ိတ်နဲနဲ ချသွားရတယ်။ အဲဒါမှ ဟိုကျ အသေစားတာနဲ့ အတော်ပဲ ဟဟဟားးးး
ပုဂံကို မျှော်နေပါတယ်။ ပုံတွေ အရမ်းကောင်းမှာပဲ ဆိုတာ သိနေလို့ အတော်ကို ကြည့်ချင်နေမိတယ်း))
Agree with Anonymus from above. Waiting for 4.
so lovely Thar lay's photo
စာရေးကောင်းပြီး ပုံတွေကလှတော့ တကယ့်ကို လွမ်းသွားတယ်ဗျာ။ သနပ်ခါးနဲ့ သားသားရဲ့ပုံလေးကို တအားသဘောကျသွားတယ်။
waiting your continue post..
သနပ်ခါးနဲ့သားသား က တော့ချစ်စရာကောင်းပါ့
သနပ်းခါးနဲ့ သူ့ဖေဖေ ကိုတော့ ဘယ်တော့များမှ မြင်ရမှာပါလိမ့် အော် အရိပ် အရိပ်း)
Reader ထဲကနေ ဖတ်နေရာက ကောမန့်ပေးချင်လို့ ဘလော့ကိုရောက်လာတယ်။
စာအရေးသား အရမ်းကောင်း၊ ဒါ့ပုံတွေ လှ......
ဟက်ပီးတော့ စစ်တီးမတ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင် ရောက်ဖူးတယ် အင်းလျားလမ်းကဆိုင် မရောက်ဖူးဘူး။
ဂဏန်းပျော့ဆိုတာ အခွံလဲထားကာစ ဂဏန်းလေးတွေ အခွံ မမာလာခင်အချိန်မှာ ချက်စားတာဆို ဟုတ်လား။
သားလေးတော့ ဘာမဆို အသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီး ပျော်နေမှာပဲနော်...
ပုဂံလိုက်လည်ဖို့ စောင့်နေပါတယ် :D
မြန်မာစာတွေအားပါးတရတင်ထားတဲ့အကို့ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ကျနော်လဲ ကြိမ်းထားတယ် ၄ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ့ ဟဲ ဟဲ ..
သားလေးအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာမေတ္တာကိုတော့ တကယ်ကို လေးစားမိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေ လှလွန်းလို့ အစားအသောက်တွေများဆို ရှေ့မှာ တကယ်ရောက်နေတယ်လို့တောင် ထင်ရတယ်။
သနပ်ခါးလိမ်းချင်တဲ့ ကလေးလေးကို သဘောကျလိုက်တာ။
ကိုညီလင်းရေ ကျွန်မလည်း နေဝင်ချိန်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ သဘောကျတယ်။
နောက်ပိုစ့်မှာတော့ ပုံကောင်းကောင်းတွေ တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာ သိပ်သေချာပါတယ်။ ပုဂံရဲ့ နေဝင်ချိန်ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံး မြင်ကွင်းထဲမှာ ပါတယ် မဟုတ်လားနော်။
awwwwn, i can't wait to read the next post !
စောင့်မျှော်လျှက်ပါ ကိုညီလင်းသစ် ရေ
သားသားက သနပ်ခါးလေး နဲ့ ပုံ လေးဆိုလဲ လှမှာဘဲ နောက်တခေါက် လာရင် လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတော့မယ် တနှစ်တခေါက် တော့ ပြန်လာပါလား သားသား မြန်မာပြည် နဲ့ မစိမ်းအောင်
မရွှေစင်ဦးပြောတာ ထောက်ခံပါတယ် သားသားကို မြန်မာပြည်နဲ့ မစိမ်းအောင် ပြန်သင့်တယ် အဆင်ပြေရင်ပေါ့ဗျာ.. မိခင်ဘာသာစကား ၂မျိုးလုံး ကျွမ်းကျင်တော့ သားလေးအတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့
တော့ သဘောကျလွန်းလို့ အသံထွက်ပြီးရီမိတယ်..။
စာအရေးအသားရော၊ ဓာတ်ပုံတွေရော၊ စာရေးသူရဲ.ထင်မြင်ချက်ပေးထားတာတွေရော၊ သားလေးပုံရော ....ဒီပို.စ်ကိုအလွန်အားရပါတယ်။စားစရာပုံတွေတွေ.ရတော.၊ ထုံးစံအတိုင်း ချဉ်ပေါင်ကြော်ကို သေချာကိုစိုက်ကြည်မိတယ်။မစားရအတော်ကြာလှရှိနေပေါ.။ အော် ..ဒုတ်ခ ဒုတ်ခ..
ရန်ကုန်မှာ တော်တော်ပူနေတယ်ပြောကြတယ်၊ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ.အမျိုးသမီးရော အပူဒဏ်ခံနိုင်ခဲ.ရဲ.လား၊ သားလေးနဲ.အမျိုးသမီး တော်တော်အပူခံခဲ.ရမယ်ထင်တယ်။
ဆိုင်နာမည်တွေမှတ်သွားတယ်... ခလေးလေးပုံလေးတွေက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ... ချဉ်ပေါင်ကြော်...ပုဇွန်ထုတ်ဟင်း... ဂဏန်းပျော့ကြော်... လွမ်းစရာတွေအများသား
ပုံတွေကလည်းကောင်း အရေးအသားကလည်းကောင်း.. အားကျစွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျား :D
သနပ်ခါးလိမ်းပြီးလို့ ဖြစ်နေတဲ့သားရဲ့မျက်နှာလေးသဘောကျတယ်...။ အစ်ကိုတစ်ယောက် စားချင်စရာတွေနဲ့တကယ်ကို စက်ရက်တယ်... ပြီးတော့ ဘေးတိုက်ဟာသကို ကြိုက်သွားပြီ..။ ငါးပိထမင်းကြော်လေးစားချင်လိုက်တာဗျာ..။
i would like to know, what kind of camera you use with brand n model number
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး အကြောင်း ခပ်ညည်းညည်းလေး ဆိုပြီးမှ ပုဂံကို မျှော်လျှက် ဆိုတဲ့ ကော်မန့်လေး သဘောကျတယ်ဗျ..၊း)
တရုတ်ကားတွေလို အပိုင်းများများ ခွဲပေးပါ..?
ဝယ်..ကျန်ကျောင်း၊ ဒီလို ကိစ္စမျိုး ရှိသလား!း)
Merci à toi aussi pour ce joli commentaire !!!
ဝိတ်တက်တာတော့ မပြောနဲ့ဗျို့၊ တသက်နဲ့ တကိုယ် တခါမှ ဒီလောက်များများ မတက်ဖူးဘူး၊ ၄ ကီလိုခွဲ တက်သွားတယ်.. ဟူး၊း(
Yeah, I'll try to post No.4 asap ...!
Anonymous (1) ...
လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်၊ ပုဂံပို့စ်လည်း ခပ်မြန်မြန် တင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်..၊
ဟုတ်ကဲ့၊ အမြဲလိုလို လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျနော်က ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ..၊
Anonymous (2) ...
Thank you for your visit, too !
အာ.. အဲဒါတော့ ဖြစ်မယ် မထင်ဘူးဗျ၊ သူ့အဖေက သနပ်ခါး လိမ်းလေ့ မရှိဘူးလေ၊ ငယ်ငယ်က အဖွား အတင်းလူးပေးလို့သာ လိမ်းခဲ့ရတာ...၊း)
ရီဒါမှာ ကြည်စရာတွေနဲ့တင် ရပ်မနေဘဲ ဒီကမ္ဘာကို ရောက်လာပြီး တကူးတက ကော်မန့်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ၊ အဲဒါ သိသွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်လည်း နည်းနည်း 'နင်' သွားတယ်၊ ကျနော်တို့တွေ သိပ်ရက်စက်ရာများ ကျနေမလား? စားချင်စိတ် သိပ်မရှိ တော့ဘူး..၊
အေးဗျာ၊ ညီမ ပြောတာပဲ ဟုတ်မှာပါပဲ၊ ကျနော်က ငါးဆို ရွှေငါးလောက်ပဲ ကောင်းကောင်းသိတာ...၊း) ၄ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ဟိုရောက်ရင်တော့ အတိုးချသာ စားဗျို့၊ ဒါနဲ့ အဲဒီမှာ လုံကန်းသီးတော့ မရှိလောက် ပါဘူးနော်..၊းP
မအိုင်အိုရာ တို့လို လူတွေ ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ မရှိ ရှိတာ တွေနဲ့ ဟင်းကောင်းတွေ ကြံဖန်ချက်တတ်လို့ ကျနော်တို့တွေလည်း ဗဟုသုတရ၊ ပြီးတော့ ပုံတွေကြည့်ပြီး သွားရည်တွေကျ..၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အတို့အမြှုပ်က သူ့ချည်းပဲ ငါးပိရည်နဲ့ စားရင်တောင် နှစ်ပန်းကန်လောက် ကုန်နိုင်တယ်ဗျို့၊း)
ဟုတ်တယ်နော်၊ နေဝင်ချိန်တွေ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရတာ မိုက်တယ်၊ ပုဂံနေဝင်ချိန်က တိမ်ကင်းစင်တယ် ဆိုရင် လှတာတော့ တကယ်လှတယ်ဗျာ..၊
Wow.. thanks for your comment which encourages me to post asap ! :)
ဟုတ်ကဲ့ အမ၊ ကျနော်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အဲဒီလို လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထား ပါတယ်၊ ငယ်စဉ်မှာ အမြစ်တွယ်ဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား..၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါဟာ သူ့အတွက် နောင်အခါမှာ အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စပဲမို့ ကျနော်လည်း စဉ်းစားထား ပါတယ်..၊
အေးဗျာ၊ သူ ပြောင်းလဲသွားတာ အတော်ကြာပါပြီ၊ ကျနော်တို့ အားလုံးလည်း သိကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုက နည်းနည်းများ ပြန်ကောင်းလာ မလားလို့ မျှော်လင့်ချက်ကလေး ထားမိတာ ပါဗျာ..၊
သေချာကို အသေးစိတ်ဖတ်ပြီး ပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်လေး အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ..၊ ရန်ကုန်မှာ ပူတာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ သူတို့လည်း ဒီလိုပဲ ကြိတ်မှိတ်ခံ၊ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်ပေါ့လေ၊ တခြားလည်း လုပ်စရာမှ မရှိတာပဲကိုး...နော၊း)
ကျနော်လည်း အဲဒီ ဟင်းပွဲဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း ခပ်လွမ်းလွမ်းနဲ့ တင်လိုက်တာ ပါပဲ..၊း)
လာလည်တာ အတွက်ရော၊ ထူးထူးခြားခြား ထားခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါဗျို့..၊း)
ဟုတ်ကဲ့၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ စိတ်ဝင်စားပါ ခင်ဗျာ၊
အဲဒီ ငါးပိထမင်းကြော် ကတော့ တကယ့်ကို မမေ့နိုင် စရာပါပဲဗျာ..၊း(
Ko thiha ...
It'saCanon 5D mark II.
ဂဏန်းပျော့မွေးသူတွေဟာ သူတို့ အရေခွံပြန်မမာခင်မှာ ဆားငန်ရေထဲကနေ ရေချိုထဲကို ပြောင်းထည့်ပြီး အခွံပြန်မမာတော့အောင် လုပ်ကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် သေချာမသိပေမဲ့ .. တကယ် သနားဖို့ကောင်းတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ..လူတွေစားသောက်နေတဲ့ သတ္တ၀ါလေးတွေရဲ့အသက်မှန်သမျှဟာ ..ကိုယ်လိုပဲ အသက်တစ်ချောင်းပါပဲ ...။ အသက်တစ်ချောင်းချင်းအတူတူ အားနည်းတတ်သူကို နိုင်စားတတ်တဲ့ လောကဟာလည်း တကယ်တော့ ကြောက်စရာ .....။
ဂဏန်းအထီးက အမကို မိတ်လိုက်ချင်ပြီးဆိုရင် အမရဲ့ လက်မ နှစ်ဘက်ကို အတင်း ညှပ်ပြီး ချုပ်ထားရတယ် အမက ဘယ်လိုမှ ရုန်းလို့ မတတ်တော့ သူ့ရဲ့ အခွံကို ချွတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်.. အဲလို ချွတ်ပေးလိုက်ရင် ဂဏန်းမ ဟာ အန္တရာယ် အလွန်များပါတယ်.... အဲဒါကြောင့် ဂဏန်းထီးတွေက အမ ရဲ့ အခွံ အသစ် ထွက်မလာ မချင်း အနားမှာ စောင့်ပေးရပါတယ်..
ဒီအချိန်မှာ တခြား ဂဏန်းတွေက လာပြီး ဒုက္ခပေးမှာ ဆိုးလို့ပါ.. အထီးတွေ အခွံလဲရင်တော့..အမတွေကစောင့်ပေးလေ့မရှိဘဲနဲ့ တခြားအထီးတကောင်နဲ့ပျော်ပါးလေ့ရှိပါတယ်..ဂဏာန်းမတွေကသစ္စာမရှိပါ..ဂဏာန်းပျော့များဟာအများအားဖြင့်အထီးတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်..
( ဂဏန်းပျော့ စားချင်သူတွေ အတွက်ပါ )
မြန်မာစာတွေကို အပြတ်ကို ဆွဲလာခဲ့တယ် ထင်တယ်... အစ်ကို့ သားလေးက တော်တော်လေး ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်... မန္တလေး ဘီယာက အရင်လို သောက်လို့ မကောင်းတော့ဘူး အစ်ကိုရေ... ပုဂံခရီးကို မျှော်နေပါ့မယ်...
you areagood writer , that's why i used to come to ur blog. hope to read another coming post
အစ်ကိုရေ.. တခြားခရီးသွားဆောင်းပါးတွေနဲ့မတူ.. ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းအားကြီးပါတယ်... ဘိုရုပ်လေးနဲ့ သားလေးကို သနပ်ခါးလေးလူးပေးနေတာမြင်တော့ ကြည်နူးစရာ..း)))
သနပ်ခါးနဲ့ သားသားက ချစ်စရာကောင်းတယ်... အစ်ကို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး အိပ်ပြန်ချင်လိုက်တာ... အထူးသဖြင့် သင်္ကြန်နား နီးတော့ပိုပြန်ချင်တယ်... ရန်ကုန်သင်္ကြန်နဲ့ ဝေးနေတာ ၅နှစ်ရှိပြီလေ... ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်... ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါတယ်
Wonderful post.I appreciate each and every sentence and photo.The whole post drives me crazy as you know my days.I will go on reading as long as i can.
with fast heart beats,
ခရီးသွားနေလို့ ခုမှပဲလာဖတ်ဖြစ်တယ် ကိုညီလင်းသစ်...သားကလေးရဲ့ သနပ်ခါးနဲ့မျက်နှာကိုကြည့် သနပ်ခါးနံ့မွှေးမွှေးအေးအေးလေးတောင် ရသွားတယ်...။ ဟက်ပီးက ထမင်းက ငါးပိထမင်းကြော်မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ငပိရည်ထမင်းသုပ်နဲ့ပိုတူနေလို့...။ ရိုက်ချက်လေးတွေအားလုံး ကြည်လင်ပြတ်သားလွန်းလို့ ပုံတွေကြည့်လို့သိပ်ကောင်းတယ်...။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နှလုံးသားကို ခိုင်းနှိုင်းရေးထားတာလေး သိပ်ကြိုက်တယ်...။
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ပို့စ်လေးဖတ်ရတာ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ.
ဓာတ်ပုံတွေလည်းကောင်း၊ ရေးသားပုံလည်းကောင်း၊ အစားအသောက်တွေကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပါပေတယ် ဘရားသား.း)
အဲဒီအပိုဒ်လေးဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲကို လှိုက်ခနဲပဲ ဖြစ်သွားတယ် အခါခါပြန်ဖတ်မိတယ်
ဒီစာလေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ခုနက လှိုက်ခနဲ ခံစားနေရာကနေ မျက်ရည်တောင်လည်မိတယ် သားလေးငြိမ်ပြီးတော့ သနားခါး အလိမ်းခံနေတဲ့ပုံလေးတွေ့တော့ ကြည်နူးပြီး ပြုံးရပြန်ရော
ကွန်မန့်ရေးခဲတယ် ဒီမှာဆို တခါမှတောင်မရေးဖြစ်ဖူးလားပဲ ဒီတခေါက်မနေနိုင်လို့ ရေးမိတယ်... လေးစား ချီးကျူးမိပါတယ် အစ်ကို
ဆိုင်ဝန်ထမ်းကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာမှာလဲ ပီတိအပြုံးကို တွေ့ရတယ် ကိုညီလင်းသစ် ခွင့်ပြုမယ်ဆို ညီမရဲ့  Facebook မှာ သားလေးရဲ့ သနပ်ခါး အလူးခံနေတဲ့ပုံလေးတင်ထားချင်တယ်
ကျနော်လည်း ပြန်မယ် နောက်လ . သားသားပုံတွေ များများတင်ပါ ချစ်လွန်းလို့ 
ညီမ Plan ကတော့
ခွင့်ပြုပါတယ်ဗျာ..၊ Source ကို ပြောပြပြီး တင်ထား ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ..။
တကယ်ပါပဲ။ ရန်ကုန်တောင် ပြန်ချင်သွားတယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့ဆိုင်တွေ တိုးလာပြီ။
ပုံထဲကအစားတွေအားလုံး အားလုံးကြိုက်တယ် ယောင်းမတယောက်ခေါ်သွားလို့ ခိုင်ခိုင်ကျော်မှာသွားစားဖူးဖြစ်တယ် သားသားက သနပ်ခါးလေးငြိမ်ပြီးလူးခံနေတာ ချစ်စရာ ကောင်းးးးးးးးးးး ကျမဆီမှာလည်း ရန်ကုန်ကနေ မှာလိုက်တဲ့ကျောက်ပြင်သနပ်ခါးရှိတယ် သမီးက အိမ်မှာတော့ အလိမ်းခံတယ် အပြင်ထွက်ရင်တော့ အလူးမခံဘူး ...
အတူတူလိုက်မျောနေရင်း ပို့စ်ဆုံးတော့ တော်ပါသေးရဲ့လို့ တွေးမိတယ်။ ဆက်ဖတ်စရာ ရှိသေးလို့လေ။ အပိုင်း ၄ ကို ရင်ခုန်အုံးမယ်ဗျာ။
ကျနော်ပြန်ဖြစ်ရင်လည်း ဒီလိုပဲ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ခံစားချက်တွေက ဆီးကြိုနေမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေက ရှယ်ပဲ ကိုညီရေ..ဗိုက်တောင် ဆာတယ်..သနပ်ခါး မလိမ်းဖြစ်တာ ၅နှစ်လောက် ရှိပြီ..ကိုညီ့သားလေး လိမ်းတာ မြင်ရတော့ လိမ်းချင်သွားတယ်..ချဉ်ပေါင်ကြော် စားချင်လိုက်တာ..
“ ချစ်သောရန်ကုန်.. မင်းဘေးမှာ ကိုယ် ရောက်နေခဲ့ပြီ..” ဆိုတာ ဖတ်မိတော့ ဗမာဆိုတာ ဒါပါဘဲလို့ ခံစားလိုက်မိတယ်။
သားသားမျက်နှာ သနပ်ခါးဖွေးဖွေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ...
အပိုင်း (၄)သို့ ဆက်၍ ချီတက်လိုက်ဦးမည်။
သနပ်ခါးနဲ့ သားကလေးကို အချစ်ဆုံးပဲ
(ငါ့နှယ် ကတ်ကြေးတစ်ကိုက် ကတည်းကက ဒီသေးသေးလေးကို ချစ်လိုက်ရတာ..ခုထိကိုပါပဲ :D)
RC နား ပုံတွေ မြင်တော့ ပြုံးမိတယ်..ညီမ ကမ္ဘောဇကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏခဏ လာရတဲ့ နေရာ....
သဘောတကျ စိတ်နဲ့ကို ငေးမောလာခဲ့ပါတယ် :))